H5N1 na-efe efe nke ukwuu na influenza avian na Czech Republic
Oge nzipu: Mee-17-2022
H5N1 na-efe efe nke ukwuu nke influenza avian na Czech Republic Dị ka Òtù Na-ahụ Maka Ahụ Ike Ụwa (OIE) siri kwuo, na May 16, 2022, Ụlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ọrịa anụmanụ na Czech gwara ndị OIE na ntiwapụ nke H5N1 nke nwere nnukwu ọrịa avian influenza mere na Czech Republic. ...GỤKWUO _
Ọrịa Newcastle malitere na Colombia
Ọrịa Newcastle malitere na Colombia Dị ka Òtù Na-ahụ Maka Ahụ Ike Ụwa (OIE) siri kwuo, na Mee 1, 2022, Ministri na-ahụ maka ọrụ ugbo na mmepe ime obodo Colombia gwara OIE na ntiwapụ nke ọrịa Newcastle mere na Colombia. Ọrịa a mere n'obodo Morales otu...GỤKWUO _
Tiwapụ nke influenza avian nke ukwuu na Hokkaido, Japan, butere igbu nnụnụ 520,000.
Oge nzipu: Eprel-30-2022
An outbreak of highly pathogenic avian influenza in Hokkaido, Japan, led to the culling of 520,000 birds More than 500,000 chickens and hundreds of emus have been culled in Two poultry farms in Hokkaido, Japan’s Agriculture, Forestry and Fisheries Ministry announced Thursday, Xinhua ...GỤKWUO _
Ọrịa avian influenza H5N1 na-akpata nke ukwuu emela na Hungary
Oge nzipu: Eprel 16-2022
Ọrịa avian influenza na-efe efe nke ukwuu emeela na Hungary Dị ka World Organisation for Animal Health (OIE) si kwuo, Eprel 14, 2022, Ngalaba nchekwa nri nri nke Ministry of Agriculture Hungarian gwara OIE, ntiwapụ nke nnukwu nje H5N1 avian. inf...GỤKWUO _
Oge nzipu: Eprel-09-2022
Nchịkọta nke ntiwapụ nke ahụ ọkụ ezì Africa na Machị 2022 A kọrọ ikpe iri nke ọrịa ezì Africa (ASF) na Hungary na 1 Maachị asaa ka ...GỤKWUO _
Avian influenza ọrịa na-efe efe ọnwụ ụmụ anụmanụ kwesịrị elu-okpomọkụ igba ogwu mechiri emechi ọgwụgwọ
Oge nzipu: Eprel-01-2022
Ngalaba Agriculture nke Nebraska ekwupụtala ọrịa flu nnụnụ nke anọ steeti n'azụ ụlọ ugbo dị na Holt County. Ndị nta akụkọ Nandu mụtara site na Ngalaba Agriculture, United States na nso nso a 18 steeti nwere ọrịa nnụnụ nnụnụ. Ndị Nebras...GỤKWUO _
Ọrịa Avian malitere na Philippines gburu nnụnụ 3,000
Oge nzipu: Mar-26-2022
Avian flu outbreak in Philippines kills 3,000 birds According to the World Organization for Animal Health (OIE), on March 23, 2022, the Philippine Department of Agriculture notified OIE that an outbreak of H5N8 highly pathogenic avian influenza occurred in the Philippines. The outbr...GỤKWUO _
Ihe dị ka ezì 12,000 kụdara n'ihi ntiwapụ nke ahụ ọkụ ezì na ugbo ezì na Japan
Dị ka akụkọ mgbasa ozi Japan zuru oke si kwuo, na 12th, Miyagi Prefecture, Japan kwuru na enwere ọrịa ọkụ ezì na ugbo ezì na mpaghara. Ka ọ dị ugbu a, ngụkọta nke ihe dị ka 11,900 ezì nọ n'ugbo ezì ka ekpochapụla. N'abalị iri na abụọ, Miyagi Pre...GỤKWUO _
Ọrịa ọkụ nnụnụ French na-aga n'ihu na-emebi ihe, ihe karịrị nde anụ ọkụkọ 4
Ihe karịrị nde nnụnụ anọ egbuola kemgbe ntiwapụ nke ọrịa nnụnụ na France n'oge oyi a Ọrịa nnụnụ na-efe efe na France n'oge oyi a na-eyi egwu ịkụ anụ ọkụkọ n'ọnwa ndị na-adịbeghị anya, dị ka Agence France-Presse si kwuo. Ministri ọrụ ugbo nke France kwupụtara na nkwupụta. na...GỤKWUO _
Ihe dị ka nnụnụ 27,000 egbuola n'ihi ntiwapụ nke flu nnụnụ India
Ihe dị ka nnụnụ 27,000 ekpochapụla na ntiwapụ nke flu nnụnụ India Dị ka World Organisation for Animal Health (OIE), na 25 February 2022, Ministri nke Azụ, anụ ụlọ na mmiri ara ehi nke India gwara OIE banyere ntiwapụ nke nnukwu nje H5N1 avian influenza. India. ...GỤKWUO _
Ihe ntiwapụ nke ọrịa flu nnụnụ egbuola ihe karịrị 130,000 nne okuko n'ugbo a na-azụ ụmụ na Spain.
Ihe karịrị ụmụ ọkụkọ 130,000 ka agbadatala n'ihi ntiwapụ n'otu ugbo dị na mpaghara Baladolid na ugwu ọdịda anyanwụ Spain. Ọrịa ọkụ nnụnụ malitere n'isi ụtụtụ a, mgbe ugbo ahụ chọpụtara mmụba dị ukwuu na ọnụ ọgụgụ anụ ọkụkọ na-anwụ anwụ. Mgbe ahụ, ọrụ ugbo mpaghara, ịkụ azụ a ...GỤKWUO _
Uruguay kwuputara ihe mberede gbasara anụ ọkụkọ mba
Oge nzipu: Feb-10-2022
Dabere na akwụkwọ akụkọ "National News" nke Uruguay kọrọ na Jenụwarị 18, n'ihi oke ọkụ na-adịbeghị anya gafere Uruguay, butere ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke anụ ọkụkọ nwụrụ, Ministri na-ahụ maka anụ ụlọ, ọrụ ugbo na azụ azụ kwupụtara na Jenụwarị 17 na mba ahụ nwere. .GỤKWUO _
123456Next> >> Peeji nke 1/6
H5N1 nke ukwuu nje influenza avian na...
Ọrịa H5N1 na-efe efe nke ukwuu na Czech Republic Dị ka World Organisation for Animal Health (OIE) siri kwuo, na Mee 16, 2022, ndị Czech National Veterinary Administration gwara OIE na…